Pizi nembatatisi yakakangwa uye bhekoni | Kicheni Mapepa
Maria vazquez | 05/06/2021 10:00 | Vegetable Recipes
Kumba, tajaira kudya mapea ndoda vhiki rega rega. Isu tinogara tichivagadzirira nenzira yakafanana nekusiyana kudiki. Nei uchiita shanduko kune zvekare peas ne ham Zvinotibatsira kuti tirege kufinhwa patafura. Uye hongu, zvinobatsirawo mukugadzira shanduro dzakareruka seichi che Pizi nembatatisi yakakangwa uye bhekoni.
Mbatatisi yakakangwa icho chinowirirana chakakwana kune pizi. Iyo inopa iyi dhishi kubata inotapira iyo inogara ichikwezva kwandiri uye inopesana zvakakwana neine munyu kubata kwebhekoni. Isu takawedzera zvakare hanyanisi, nekuti hanyanisi inogara iri yekuwedzera.
Unoda kuitazve iyi dhishi? Kuita izvi kuchave kuri nyore kwazvo kwauri. Izvo zvinongedzo runyorwa idiki uye kukura kwe iyo yekubheka yakagadzirirwa muhafu yeawa. Ipo mbatatisi iri kubika muchoto, iwe unenge uine nguva yekugadzirisa zvimwe zvigadzirwa. Tarisa uone!
2 makobvu matete ebhekoni
1 yakasvibirira mbatata
50 ml. imwe mhandara yemafuta emuorivhi
⅓ teaspoon yema paprika
Isu tinopisa huni kusvika ku220ºC.
Kana wapedza, tinosanganisa mafuta mukapu, munyu nepaprika kukwesha mbatatisi.
Mushure mezvo, tinosvuura mbatatisi uye cheka kuita masendimita maviri. gobvu iyo yatinoisa patirairi yekubheka, pabepa rechinyorwa.
Bhurawura nemusanganiswa watakagadzirira matapiri etapiri uye bika kwemaminetsi gumi nemashanu kana kutozosvikira nyoro uye micheto zviri zvishoma zvendarama.
Ipo iwo matapiri mbatatisi ari kugocha, mune skillet sanganisira hanyanisi kwemaminetsi gumi nemashanu nemapuni maviri emafuta.
Panguva imwecheteyo, muhombodo ine mvura uye munyu ngatibikei pizi kwemaminetsi masere kana kusvika vaine hunhu hwaunoda.
Ipapo isu tinosanganisa bhakoni rakachekwa kana kukanda pani nehanyanisi uye sveta kwemaminetsi mashoma. Kuti upedze, wedzera mapea akabikwa uye akadirwa uye sanganisa moto.
Panguva ino tichava nezvose zvigadzirwa zvakagadzirira kukwira ndiro. Isa zvidimbu zvembatatisi muzasi uye pamusoro pazvo hanyanisi, bhekoni uye peas musanganiswa.
Pakupedzisira uye tisati tashandira mapizi neinotapira mbatatisi uye bhekoni, tinowedzera chitsva pasi pepper
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Vegetable Recipes » Mapeya ane mbatatisi yakakangwa uye bhekoni